I-China MQY Echichimayo Uhlobo lwefemu ye-Ball Mill nabaphakeli | Luhle
I-MQY Yokuchichima Uhlobo lwe-Ball Mill
Isicelo: Umshini wokugaya ibhola uluhlobo lwemishini esetshenziselwa ukugaya ama-ores nezinye izinto ngobunzima obuhlukahlukene. Kusetshenziswa kabanzi ekusebenzeni kwe-non-ferrous and ferrous iron, amakhemikhali, izinto zokwakha kanye nezinye izimboni njengezinto eziphambili zomsebenzi wokugaya.
I-Wet energy ball ekhiqiza amandla amaningi egcwala igesi yakhelwe ngokuthuthuka ngesisekelo somshini wokugaya wehlobo elidala. Kuluhlobo olusha lomshini wokugaya onedizayini enengqondo nokusebenziseka okuhle. Imishini ilula isisindo, futhi inamandla amancane okusetshenziswa, umsindo ophansi, ukusebenza kahle okuphezulu, ukufakwa okulula nokulungisa iphutha.
Lo mkhiqizo usetshenziswa kabanzi e-metallic and non-iron metre processing plant, amakhemikhali, izinto zokwakha nakwezinye izimboni ukugaya izinto zokwakha. Uhlobo lwegridi yeWet kanye nohlobo lwechichima kusetshenziselwa ukugaya izinto zokwakha ngobunzima obuhlukahlukene kwinqubo emanzi.
1.Udivayisi wokondla 2. Ukuzala 3. Isembozo sokugcina 4. Umzimba wesigubhu
5. Amagiya amakhulu 6. Ukuvula okuvulekile 7. Ukudluliswa kwengxenye 8. Uhlaka
Ingxenye yomgubhu oyimigodi yebhola idonswa ngamandla ukuze ijikeleze nge-asynchronous motor ngokusebenzisa i-ancer kanye namagiya amakhulu aseduze. Imidiya yokugaya efanelekile -amabhola ensimbi alayishwa ngaphakathi komzimba wesigubhu. Amabhola wensimbi aphakanyiselwa ekuphakameni okuthile ngaphansi kwamandla we-centrifugal kanye ne-fiction Force, futhi awele kwimodi yokudonsa noma yokuthela. Izinto ezizokwakhiwa zingena emzimbeni wesigubhu ngokuqhubekayo kusukela ekuvulekeni kokuphakelayo, futhi zizoshaywa ngokuhambisa imithombo yezindaba. Imikhiqizo izoxoshwa emshinini ngokuchichima namandla okuphakelayo aqhubekayo wokucubungula isinyathelo esilandelayo.
 Amanani ethebula alinganiselwa kumthamo. Kumaminerali wosayizi angama-25 ～ 0.8mm nobulukhuni obuphakathi, usayizi wokukhipha ungama-0.3 ～ 0.074mm.
 Ukucaciswa okungenhla ngaphansi kwe-Φ3200, i-MQYG yokusindisa amandla emishini iyatholakala.
Esedlule: I-Dry Powder Electromagnetic Separator
Olandelayo: MBY (G) Uchungechunge Luchichima I-Mill Mill
Uchungechunge CFLJ Rare Earth Roller Magnetic Separator
Uchungechunge lwe-YCBG Olushukumisayo Olungahlukanisi Komisi ...
Izinsimbi Ezisebenza Ngezinto Ezomile
Ukonga amandla okusonga okwenziwe ngogesi